एनएमबि लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ११ पुस २०७६)
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ । गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा रू. १० लाख १७ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १ करोड ५२ लाख ८६ हजार खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । यस कम्पनीमा एनएमबि बैंकको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १६ करोड २० लाख छ ।
कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि कात्तिक २४ गते देखि मंसिर २९ गते सम्म १ सय ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । सो हकप्रद शेयर बाँडफाँट पश्चात चुक्तापूँजी रू. ४० करोड ५० लाख १५ हजार पुग्नेछ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३७ दशमलव ७४, मूल्य आम्दानी अनुपात रू. २८ दशमलव ५४, तरलता अनुपात १६ दशमलव ३८ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय दशमलव ३९ छ । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ५६० कायम भएको छ ।
2019-12-27 - 212 view(s) - abhiyandaily